संसारमा ३ प्रतिशत मानिसको हत्केलामा मात्र हुने यस्तो चिन्ह, तपाईकोमा पनि छ की ? - Babal Khabar
November 14, 2021 by बबाल खबर
ज्योतिष विद्या यस्तो विद्या हो जसले केहि न केहि तरिकाबाट मानिसको भविष्य बताउँछ । पछिल्लो समयमा यो विद्या प्रमाणित पनि भइसकेको छ।
Posted in मनोरञ्जन, रोचक
Prevयस्ता राशी भएका पुरुषले पाउछने सुन्दर श्रीमती !
nextअनिष्ट हुन्छ ,संकट आइलाग्छ: खाट, पलंग मुनी राख्नु हुँदैन यी वस्तु !